I-Oppo A7: amanqaku, iinkcukacha, amaxabiso kunye nokufumaneka | I-Androidsis
I-Oppo A7 isungulwe: amanqaku, iinkcukacha zobugcisa, ixabiso kunye nokufumaneka
Emva koko amarhe ezahlukeneyo nokulindelweyo, i-Oppo A7 ngoku isemthethweni. Le mobile isandula ukuboniswa yinkampani yaseTshayina kunye nazo zonke iinkcukacha zayo eziphambili.
Isixhobo sineempawu ezibonakalayo zoluhlu oluphakathi, nangona icoceke kakhulu kwaye iyile kakuhle kakhulu yoyilo kunye nembonakalo. Ke ukuba ujonga ifowuni premium phakathi kuluhlu, esi siginali sitsha lukhetho olukhulu. Sinikela kuwe!
I-Oppo A7 ikhutshwe kwiinguqulelo ezimbini: i-China, inesiphelo esimenyezelayo sepaneli yangemuva, ngelixa ushicilelo oluya ngaphandle kwalo mmandla lunomtsalane obhaliweyo. Ukulinganisa i-155.9 x 75.4 x 8.1mm kunye nobunzima be-168 gram, izindlu ezihambayo zi-6.2-intshi engafakwanga isikrini se-IPS LCD, enikezela umlinganiso wesikrini ukuya kumzimba we-88.3% kunye nesisombululo se-HD + se-1.520 x 720 pixels. Isikrini esikhulu sine-anti-reflective coating kwaye sinokhuselo olunokubonelelwa yiCorning Gorilla Glass 3.
I-450GHz Snapdragon 1,8 SoC inika amandla isixhobo kunye ne-4GB ye-RAM. Indawo yokugcina yefowuni yi-64GB. Inenkxaso yekhadi le-MicroSD. Kwamanye amazwe, i-smartphone ifakwe enye imodeli equka i-3GB ye-RAM kunye ne-32GB yokugcina eyakhelwe-ngaphakathi.
Uqwalaselo lwe I-13 kunye ne-2 megapixel ethe tye yekhamera ebekwe ngasemva kwe-Oppo A7. I-smartphone inokubamba imifanekiso ekumgangatho we studio kunye nefuthe le-bokeh ngokusebenzisa itekhnoloji yobuhle ye-AI. Ukuthabatha ividiyo ecacileyo, ixhasa itekhnoloji yozinzo lwemifanekiso emininzi. Iilensi ezili-16 ze-megapixel ezibanzi ezibonisa imo ye-HDR zifakelwe ngaphakathi kwenotshi yefowuni yee-selfie nokunye. Ifowuni ibandakanya ukuxhaswa kwezitikha ze-AR.
Inkqubo yokusebenza ye-Android 8.1 esekwe kwi-ColourOS 5.2 iyafumaneka kwifowuni. Ukongeza, kubandakanya ibhetri enkulu ye-4,230 mAh. Ikwabonisa ulawulo lwebhetri ye-AI yokwandisa ukusebenza kwebhetri kunye nokufunda ngomnwe wangasemva. Ezinye izinto ezikhoyo kwifowuni zezi: uqhagamshelo lwe4G VoLTE, inkxaso ye-SIM khadi ezimbini, iBluetooth 4.2, iWi-Fi 802.11 b / g / n, i-USB OTG, i-microUSB 2.0, i-GPS, kunye ne-3.5mm eyintloko.
I-Oppo A7 ixabisa i-1.599 yuan e-ChinaIxabiso elaliya kushwankathelwa malunga nee-euro ezingama-200. Ukugcinwa kwe-smartphone kuqalile kwivenkile esemthethweni ye-OPPO kwiimarike zalapha ekhaya. Ifowuni icwangciselwe ukuba iye kwintengiso ngo-Novemba ngo-22 nge-10 kusasa inokuthengwa ngemibala efana neFresh Pink, iLake Light Green kunye neAmber Gold.
Kweminye imimandla, iza kwiGlaring yeGold kunye neGlaze Blue imibala. I-smartphone inamahemuhemu okuba ibhengezwe eIndiya nge-22 kaNovemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Oppo A7 isungulwe: amanqaku, iinkcukacha zobugcisa, ixabiso kunye nokufumaneka
Ungawusebenzisa njani umxholo omnyama we-Evernote: iindaba ezimnandi zeapps yamanqaku
I-Facebook Messenger sele yazisa ngokususwa kwemiyalezo